Onye na -emepụta Carbide Rod kacha mma na ụlọ ọrụ | Toonney
Toonney Tungsten Carbide Rod Manufacturer nwere ike ịnye mkpanaka carbide tungsten, igwe ihe na -ebubata carbide, mkpanaka carbide ciment, mkpanaka carbide nwere oghere coolant kwụ ọtọ/gburugburu, mkpara dị ka ihe onye ahịa chọrọ si dị, mkpara carbide T nwere, na nzọụkwụ wdg.
Ngwaahịa: Toonney Tungsten Carbide Rod Manufacturer nwere ike ịnye mkpanaka carbide tungsten siri ike, mkpanaka carbide nwere oghere coolant (otu oghere kwụ ọtọ, oghere abụọ kwụ ọtọ,) oghere carbide oghere helical, oghere carbide atọ helical), mkpara ndị yiri ya dị ka onye ahịa chọrọ, carbide preforms with nzọ ụkwụ, ụgbụ ka ọ dị nso wdg.
Usoro mmepụta: Site na ngwakọta ihe, ịpụpụta, ịkpafu, imepụta mgbanwe ụdị, tungsten carbide mkpanaka ga -abụ nke mbido, na n'ikpeazụ, a ga -etinye mkpanaka tungsten carbide n'ime ite ọkụ na -ekpo ọkụ HIP (Toonney na -eji 1Mpa, 6Mpa ma ọ bụ 10Mpa na -agbaze ọkụ iji gbanye carbide. mkpanaka dị ka ọkwa na ngwa dị iche iche si dị). Toonney tungsten carbide rod manufacturer na -eme tungsten carbide rod dị ka usoro ndị a.
Mpaghara ngwa:Site na ihe odide siri ike, ike dị elu, anụ kemịkalụ, ọnụọgụ mgbasawanye dị ala, ọkụ eletrik na ọkụ na -eduzi, mkpanaka carbide tungsten sintered na -etinyere na mpaghara nrụpụta ụlọ ọrụ. Dịka ọmụmaatụ, mee ka itinye micro micro na ụlọ ọrụ PCB. Ogwe elektrọn na -ewu ewu na ụlọ ọrụ mpaghara anya. Ngwurugwu carbide (ọkachasị mgbọ egbe), ntụtụ ntụpọ, ụdị T carbide preforms maka agụba dị iche iche ọkachasị agụba nwere nnukwu nzọ, igwe chọrọ osisi Carbide ewepụghị, ụfọdụ ụlọ ogologo carbide dị larịị (ogologo sentimita 37 dịka ọmụmaatụ) maka igwe igwe nri. nkwado, a na -ejikwa ndị na -emegharị carbide na agụba nwere oghere na -ekpo ọkụ na ụlọ ọrụ igwe. Ekele maka ịdị mma ya na ọnụ ahịa asọmpi, Toonney tungsten carbide rod manufacturer na -enwetawanye ewu ewu na ụlọ ọrụ mkpanaka tungsten carbide, dabere na nyocha afọ, mmepe na ahụmịhe nrụpụta, Toonney na -agbatị ikike ya na mkpanaka carbide na -emepụta ma na usoro ọkwa ihe. na mmepụta nke ukwu ọnụ ọgụgụ. Nabata na Toonney tungsten carbide rod manufacturer maka ozi ndị ọzọ gbasara mkpanaka carbide tungsten. Toonney tungsten carbide rod manufacturer bụ naanị ebe a na -eche gị!
Mills ọgwụgwụ carbide: Mills carbide, nke akpọkwara igwe ihe igwe nri, bụ ụdị ngwa ịkpụ carbide maka igwe igwe. Ụlọ ọrụ na-emepụta ihe na-emepụta carbide ọgwụ carbide ama ama maka igwe na-emepụta carbide dị elu. Mills na -ejedebe carbide nwere otu ma ọ bụ ọtụtụ agụba, enwere ike ịkpụgharị mkpụrụ osisi ndị ahụ wee belata ibe ọrụ n'otu n'otu n'usoro na n'otu oge. Mills carbide end, nke ụlọ ọrụ na -emepụta ihe na -emepụta carbide, na -etinyere na igwe igwe igwe iji rụpụta atụmatụ ihu, steepụ, uzo, akpụ ihu ma bepụ ihe ọrụ ahụ. Ihe carbide ciment na -arụ ọrụ nke ọma mgbe etinyere ya n'ọrụ na -eme ihe na -emepụta carbide. Ihe siri ike nke ukwuu, na -eyi nguzogide na nguzogide nrụgide na -eme ka ngwa igwe ihe carbide na -agbasa ruo ebe sara mbara n'oge dị mkpirikpi. Nabata na ụlọ ọrụ igwe ihe ọkụkụ Toonney carbide maka ozi ndị ọzọ gbasara igwe ihe carbide. Toonney carbide end mills factory dị ebe a na -eche gị!
Ihe nlele dị mkpa: Mkpanaka carbide Tungsten nke nwere ike ịdị site na ngwa ahịa anyị na -emekarị, enwere ike ịnye ya dị ka ihe nlele n'efu. Maka ụfọdụ igwe ihe na -ebubata carbide na mkpanaka carbide nke nwere ihe pụrụ iche onye ahịa chọrọ, a ga -akwụ ụgwọ. N'ezie, ndị ahịa kwesịrị ịkwụ ụgwọ maka ụgwọ mbupu. Ọtụtụ mgbe, oge izizi nke ihe nlele ga -adị n'ime ụbọchị ọrụ 7
Onu ogugu kacha nta:Enweghi oke ọnụọgụ nke mkpanaka carbide maka usoro ikpe izizi. Mana n'usoro nke abụọ, mkpokọta mkpanaka carbide ekwesịghị ịbụ ihe na -erughị 1000 USD.
Product aha: Mkpanaka carbide
Nọmba nlereanya: Mkpanaka ogologo-ogologo DIN
Ụdị: Mkpanaka carbide
Ihe: Tungsten carbide
Ngwa: Mills carbide, uzu, shank, reamers
Ndidi:Tol. Nke Dia.+0.15 ruo 0.7mm, na ogologo+1 ruo +2 dabere na nha nha.
Ọgwụgwọ elu: Oghere, aja-ọgbụgba ọkụ ma ọ bụ na-egbu maramara
Nha: A na -ahazikarị ya.
TU06 tungsten carbide mkpanaka: ọka dị oke mma, ike siri ike, ike dị elu, dabara maka ịme PCB micro-Drilling, micro milling cutter na ụdị ngwaọrụ siri ike siri ike. Re-iwu ihe iji mee ka-egwe ọka cutter nke Dia. bụ 1.2mm na n'elu.
Mkpanaka carbide tungsten TF06: dabara maka ịkpụ aluminom na alloy magnesium, alloy base alloy, alloy based iron, plastic, graphite, carbon fiber wdg.
TU08 tungsten carbide mkpanaka: Ike dị elu na ekweghị ekwe, dị mma maka ịkpụ ihe acrylic, ihe akwadoro maka ịme PCB drill na nnukwu drill nke dia. Ọ bụ 0.7mm na n'elu.
Mkpanaka carbide tungsten tung40: ihe a tụrụ aro maka mgbagharị nkịtị, igwe ihe na -ejedebe, ọkachasị dị mma iji igwe igwe ma gwuo ihe a na -ejikarị anwụ nchara, iron isi awọ, nchara Austenite na alloy.
Mkpanaka carbide tungsten TU40F: ihe a na -atụ aro maka ịme ihe, igwe ihe, wdg, na igwe igwe na -egwu igwe, igwe anaghị agba nchara, iron na aluminom nke ike ya dị n'okpuru 50HRC.
TU44 tungsten carbide rod: Kwesịrị ekwesị maka ịme ụdị ihe igwe ihe dị iche iche, reamer, agụba wdg wdg na -arụ ọrụ nke ọma n'ịchapu ngwa ngwa dịka ọmụmaatụ n'ịbecha nchara, alloy aluminom, titanium alloy wdg.
TU25 tungsten carbide rod: Ihe maka igwe ihe na ihe eji egwuri egwu iji rụọ ihe eji arụ ọrụ ihe ọkụ, ígwè, igwe anaghị agba nchara.
TU45 tungsten carbide rod: ihe akwadoro maka ụdị igwe ihe ọ bụla na-ejedebe, reamer, agụba wdg, na-arụ ọrụ nke ọma na mpaghara ịcha ọkụ ọkụ dị elu, ọkachasị dabara maka nchara agbanyụ, alloy aluminom, titanium alloy wdg.
Mkpanaka carbide siri ike nwere ogologo kwụ ọtọ, ike siri ike, na ike.
Toonney ciment carbide Rod manufacturer nwere ezigbo igwe ịpị na ịpịpụta.
A na -emebi mkpanaka carbide site na ọkụ na -enwu ọkụ na igwe HIP nwere nkọwa dị mma na -enweghị oghere ọ bụla.
Enwere mkpanaka carbide, mkpanaka carbide ciment, igwe ihe carbide na -egweri, mkpị na mkpanaka na -egbu maramara na ntachi obi ọ bụla.
A na -ejikarị igwe ihe eji arụ ọrụ carbide maka igwe ihe igwe ihe, ndị na -emegharị ihe, ndị na -eme ya, ndị na -atụgharị ego, ihe osise, ndị na -anya ụgbọ elu na ngwaọrụ rotary ndị ọzọ.
Dayameta nke igwe ihe carbide na -agbanwe site na 0.3mm ruo 40mm.
Enwekwara ọtụtụ nha nke mkpanaka carbide, mkpanaka carbide ciment, igwe ihe carbide na -arịọ arịrịọ na eserese.
Anyị mepụtara otu akara ule maka ịcha ngwaọrụ, n'etiti ha, akara dị ka TU90, TU40S, TU44, TU45 na-asọrịta mpi n'ahịa kachasị maka ịkpụ ihe siri ike ịkpụ na ihe ndị siri ike. N'okpuru bụ tebụl ọkwa., Yana ngwa akwadoro.
Nke gara aga: Ọdọ Carbide
Osote: Oghere Carbide